အိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုဘယ်လို format လုပ်မလဲ။ သေတ္တာထဲမှလတ်ဆတ်စွာထားခဲ့ပုံ။ | Gadget သတင်း
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အိုင်ဖုန်းအသစ်မည်မျှကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနေ့ရက်သည်အမြဲတမ်းရောက်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင် format လုပ်ရသည်။ သင်မှတ်ဉာဏ်ထဲ၌ရှိနေသောသင်နှင့်အမြစ်မှဖယ်ရှားလိုသောအချက်အလက်နှင့်ဖိုင်များကိုဖျက်လိုသောကြောင့်သို့မဟုတ် operating system တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆင်တူနေစဉ်အတွင်းအရေးကြီးသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုမည်သို့သယ်ဆောင်ရမည်ကိုသင်သိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်၊ Actualidad Gadget မှာဒီဆောင်းပါးမှာပါတဲ့မင်းရဲ့သံသယအားလုံးကိုဖြေရှင်းချင်တယ်၊ မင်းကိုပြမယ်။ iPhone ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများမှာအဘယ်နည်း။
ဟုတ်တယ် restore။ ပထမဆုံးသိသင့်တာကတော့ iPhone အကြောင်းပြောနေတာက Apple က iPhone ရဲ့ contents ကို format လုပ်တာ၊ ဖျက်ပစ်တာထက် restore ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်ယခုမှ စ၍ သင်ဤသင်ခန်းစာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်သင်ခန်းစာတစ်လျှောက်တွင်အကြိမ်များစွာတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကို format လုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အဓိကခြားနားချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၌ကွန်ပျူတာ (သို့) Mac ဖြစ်စေ iTunes ထည့်သွင်းထားသောကွန်ပျူတာရှိမရှိ။
1 iTunes ဖြင့်ကွန်ပြူတာမှ iPhone ကိုပြန်ယူပါ
2 ဖုန်းကို iPhone မှ Restore လုပ်ပါ
3 ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ Apple လိုဂိုကိုမြင်သလား။
4 ငါအိုင်ဖုန်းတစ်ခုရှာပြီးအဲဒါကို format လုပ်လို့ရလား။
iTunes ဖြင့်ကွန်ပြူတာမှ iPhone ကိုပြန်ယူပါ
သတိရဖို့ပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုပြန်ယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်အားလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်ဖိုင်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်အပလီကေးရှင်းများသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ အခြေခံအားဖြင့် အိုင်ဖုန်းကိုတွေ့လိမ့်မည် configure ခံရဖို့အဆင်သင့် ငါတို့လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်လိုပဲ ဒါကြောင့် iPhone ကိုဘာကြောင့် restore လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့နောင်တမရအောင်လိုအပ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးသိသာသည်: သင့်စက်ပစ္စည်းကိုအရန်ကူးထားပါ။ iTunes ကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ် Apple Cloud ကို iCloud မှာဖြစ်စေ။
ဒီကိစ္စကိုသွားတဲ့အခါဒီနည်းလမ်းဟာများသောအားဖြင့်အသုံးများပါတယ်။ ဘယ်မှာအခြေအနေ၌ကိုယျ့ကိုယျကိုရှာဖွေပြီးနောက် ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမိုဘိုင်းလုပ်ဆောင်မထားဘူးသို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပြီ ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်တဲ့အမှား, အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးဖြေရှင်းချက်မှတဆင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ် iTunes ကို။ ၎င်းသည်အစ၌ iPhone ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပြီး၎င်းသည်လူအများစုကထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုကြသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းသေချာအောင်ထက်ပိုပါတယ် iTunes ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုတရားဝင် USB-Lightning cable ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး iTunes ကိုဖွင့်သည်။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိအိုင်ကွန်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စက်ကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုမည်။ ထိုတွင်စက်၏အခြေခံအချက်အလက်အားလုံးကိုကြည့်နိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်အားလုံးတွင် IMEI နှင့် Serial နံပါတ်နှင့် ပါတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ "Search for update" နှင့် "ရွေးချယ်စရာများ"iPhone ကို Restore လုပ်ပါ" ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အရန်ကူးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုအတည်ပြုရန်အရေးကြီးသည်။ မိတ္တူကူးထားပြီးပြီဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် ချိန်ညှိချက်များ - iCloud - ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းကိုရှာပါ အဲဒါကိုပိတ်ထားရန် ထို့ကြောင့်မှန်ကန်သောပွနျလညျထူထောငျခွင့်ပြုပါ. ဤအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ကလစ်လုပ်နိုင်သည် "iPhone ကို Restore", ထိုအချိန်တွင် operating system ကို download လုပ်နောက်ခံစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်နေရာအတော်များများ GB နေရာယူထားသောကြောင့်၎င်းသည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်စဉ် iPhone ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမထိရန်အကြံပြုသော်လည်း၎င်းသည်မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်။
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့် ၁၀ စက္ကန့်ရေတွက်ပြီးနောက်, ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းကိုယ်တိုင်စတင်ပါလိမ့်မည်။ အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်၊ အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်တိုးတက်မှုဘားတို့နှင့်အတူမိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သည်၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ပထမဆုံးအကြိမ်ထပ်တူတက်လာလိမ့်မည်။
ဖုန်းကို iPhone မှ Restore လုပ်ပါ
ဒါပေမယ့်ငါတို့လည်း၏ထို option ရှိသည် iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ iPhone ကိုပြန်လည်ရယူပါ ထို့ကြောင့်မည်သည့် PC နှင့် Mac တို့တွင်မဆိုဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသောအခါအဓိကအားသာချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် PC / Mac အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ရုံသာမကဘဲ၊ အရင်တုန်းကလိုပဲ iOS version ကိုပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမှာပါ။ သို့သော်လူအများကဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ iPhone ကိုပြန်လည်ထားခြင်းသည်မှတ်ဥာဏ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပြီးအချို့အမှားအယွင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုကြသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၎င်းတွင်သက်သေပြရန်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုအထက်ရှိ iTunes နည်းလမ်းကိုအကြံပြုသင့်သည်။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်၍ ရှေ့ဆက်သွားလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အရံသိမ်းဆည်းထားမှုကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်အပိုင်းကိုရှာပါလိမ့်မည် "အထွေထွေ" iPhone setting တွင်, ထို့နောက် "Reset" option ကိုရှာသည်အထိ menu ကိုဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုစက်ရုံပြင်ဆင်မှုများသို့ပြန်ယူနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်တင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်အခြားရွေးချယ်စရာများလည်းရှိသည်။
Hola: ဤရွေးချယ်မှုသည်ကိရိယာချိန်ညှိချက်များကိုသာဖယ်ရှားပေးသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာများကိုနဂိုအတိုင်းထားရှိသည်။
အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်တင်များကိုဖျက်ပစ်ပါ - ၎င်းသည်အိုင်ဖုန်းရှိဒေတာနှင့်ဆက်တင်များအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကို iTunes မှပြန်ယူရန်ဖြစ်သည်။
ကွန်ယက်ဆက်တင်များကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ ၎င်းသည်မိုဘိုင်းကွန်ယက်များ၊ Bluetooth နှင့် Wifi တို့နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်တင်များအားလုံးကိုဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသောဖြစ်နိုင်ချေ Wifi ကွန်ယက်များကိုမေ့သွားလိမ့်မည်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ iCloud keychain ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့စကားဝှက်တွေကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။
ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ Apple လိုဂိုကိုမြင်သလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါလည်းဖြစ်ပျက်နိုင်သည် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သင်မြင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာက iTunes လိုဂိုဖြစ်သည်အထက်ပါပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း။ ဒါဆိုရင် iTunes မှတစ်ဆင့်သာကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသင်ခန်းစာ၏ပထမပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုသာလိုက်နာရမည်ဖြစ်သော်လည်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ iOS device ကို DFU Mode သို့တွန်းအားပေးပါ သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရယူခြင်းနည်းလမ်းကို၎င်းကို iTunes မှ ဝင်ရောက်၍ iTunes တွေ့ရှိသောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသို့ပြန်သွားနိုင်ပြီးပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မည်။
DFU Mode ကသင့်ကိုတရုတ်လိုအသံထွက်ကောင်းပြောကောင်းပြောလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ထူးဆန်းသည်၊ သို့သော်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်။ အကြောင်းမှာအိမ်အကြောင်းရေးစရာအကြောင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ iPhone-PC နှင့် Mac ကို USB-Lightning cable မှတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ရုံသာဖြစ်သည် Home ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့် Power ခလုတ်ကိုအသုံးပြုသကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းတွင်နှိပ်ခြင်း (Volume - နှင့် iPhone7နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ပါဝါ) ငါးစက္ကန့်။ ထို့နောက် Home သို့မဟုတ် Volume ခလုတ်ကိုသာနှိပ်လိမ့်မည်။ အဲဒီအချိန်မှာငါတို့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် iTunes အမှတ်တံဆိပ်ကေဘယ်ကြိုးနဲ့အတူပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့က iPhone ဒါမှမဟုတ် PC ကိုကြွေးတင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြလိမ့်မယ် iTunes ကိုဖွင့်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်လုပ်သောလုပ်ရလွယ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကြိုးဆွဲချရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းငြိမ်သက်အေးဆေးစွာနေပါ။
iTunes ကကျွန်ုပ်၏ iPhone ကို Recovery Mode တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောရွေးစရာများသည်မွမ်းမံခြင်း၊ ကျနော်တို့ restore ပြန်ရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် ခြစ်ရာကနေ operating system ကို reinstall ရန်။ ကံမကောင်းစွာပဲ DFU mode ရှိအိုင်ဖုန်းဖြင့်သင်၏ဒေတာကိုရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါကြောင့်ငါတို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါက iPhone ကိုငါတို့ကယ်တင်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏမိတ္တူကူးရန်အကြံပြုပါသည်။
မြန်ဆန်လွယ်ကူသောအဖြေဖြစ်သည် ဟုတ်ကဲ့အားဖြင့် ဤနည်းလမ်းများမဆို မင်းကို iPhone သင်ပေးလို့ရအောင်သင်ပေးတယ် အဖြေအပြည့်အစုံ။ iOS7ထွက်လာကတည်းကiOS ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သူတို့၏ပိုင်ရှင်၏ Apple ID နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် device restore ပြန်လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ configuration process ကိုစတင်တဲ့အခါ iPhone က Apple ID နဲ့ password တို့လို user data ကိုတောင်းမှာပါ။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်း၏တရားဝင်အသုံးပြုသူမဟုတ်လျှင်၎င်းသည်စက္ကူအလေးချိန်သာဖြစ်မည်။ ဒီတော့လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အရာကသင်ဟာ iPhone တစ်ခုကိုရှာတွေ့ပြီဆိုလျှင် Siri ကိုမေးကြည့်ပါ။ သူကဘယ်သူ့ iPhone လဲ။ ပိုင်ရှင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူရန်နှင့်မဖြစ်နိုင်ပါကရဲစခန်းသို့သွားပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုသူကိုထားရှိပါ။ သင်ပျောက်သွားသည့် iPhone ကိုပြန်တွေ့သောအခါသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » iPhone ကိုဘယ်လို format လုပ်မလဲ၊ အဲဒါကိုသေတ္တာထဲမှလတ်ဆတ်စွာထားခဲ့ပုံ
ငါ့မှာ ipad တက်ဘလက်ရှိတယ်၊ အရမ်းနှေးတယ်။ စက်ရုံမှပြန်ယူလို့ရပါသလား။
Jose rubio ဟုသူကပြောသည်
ဒါပေါ့! ဒီနည်းလမ်းက iPhone ရော iPad ရောပါအတူတူပါပဲ။ ၎င်းသည်အလွန်နှေးကွေးနေသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါကသင်ခန်းစာ၏ပထမဆုံးနည်းလမ်းကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်၊ သင်၏ဒေတာများကိုအရန်ကူးထားသည့်ကော်ပီတွင်သိမ်းဆည်းထားရန်သေချာသည်။
Jose Rubio ကိုပြန်ပြောပါ